Fitsarana… tsaraina amin’ny asany | NewsMada
Fitsarana… tsaraina amin’ny asany
Mampanahy be ihany ny fianakaviana ny amin’ny “Raharaha Valimbavaka” nany namonoana azy teny amin’ny Bani, Ivato, ilay tovolahy 15 taona. Miaramila 13 no naiditra am-ponja tamin’izany, ka manamboninahitra ambony ny efatra. Mampanontany tena ny fianakaviana ny hoe: ao anatin’ny fotoam-pialantsasatry ny fitsarana ny fahazoana fahafahana vonjy maika.Misy kolikoly? Avo lenta na mirefarefa amin’ny tany… Mby amin’ny hoe vakina fotsiny? Mila fanazavana, fangaraharana.
Efa hatrany am-boalohany ny raharaha no mafy sy sarotra ho an’ny fianakaviana: tratran’ny fampihorohoroana, kolikoly… Tany amin’ny volana jona 2021 no nisehoan’ny raharaha, desambra vao nahazoana alalana amin’ny fanaovana fanenjehana: fanadihahadiana, fampiakarana fitsarana… Nahoana? Mampieriteritra be ihany. Tsy tonga tamin’izany aza, raha tsy nanaovan’ny fianakaviana fihetsiketsehana teo anoloan’ny fitsarana. Andrasana izay ho tohiny sy faran’ny raharaha. Hanao ahoana?
Tsy mahagaga ny raharaha na endri-javatra toy izao? Saika vitavita na tsy hitahita ho azy amin’izao, rehefa karazana mpitandro filaminana itsy na iroa no voasaringotry amina heloka bevava na zava-doza toy izany. Misy hatrany ny hoe tsimatimanota? Tsiahivina eto ve, ohatra, ny raharaha momba ilay mpitsara novonoin’ny polisy tany Toliara, desambra 2010? Na fampijaliana faobe niharo fandoroana tanàna nafitsoky ny polisy tao Antsakabary, Befandriana Avaratra, febroary 2017.
Maro ny toy izany? Tsy fantatra, na odian-tsy hita, afenina… Hatraiza ny hoe fanjakana tan-dalàna amin’izany? Indrindra izay hoe fahatokisan’ny vahoaka ny fitsarana… Ny mpitandro filaminana mpampihatra lalàna no tsy tan-dalàna? Hahagaga raha tsy atokisan’ny vahoaka ny mpitandro filaminana, ny mpitsara, ny mpitondra fanjakana? Mbola mila ezaka be ny ady amin’ny fitsaram-bahoaka, tsy tongatonga ho azy amin’izao. Tsia, tsy misy manome rariny ny karazana fandikan-dalàna toy izany.
Na izany aza, tena mila ampiharina sy iainana ary ho an’ny rehetra fa tsy anavahana ny hoe fanjakana tan-dalàna. Mby aiza ihany hatramin’izao?